Imithetho eyi-10 yokuthi ungaphendula kanjani ekubuyekezweni okungekuhle ku-inthanethi | Martech Zone
Ukuqalisa ibhizinisi kungaba yinselele emangalisayo. Noma ngabe usiza ibhizinisi ngoguquko lwalo lwedijithali, okushicilelwe uhlelo lokusebenza lweselula, kuyindawo yokuthengisa, amathuba ukuthi ngeke uhlangabezane nokulindelwe ngamakhasimende akho ngelinye ilanga. Emhlabeni wokuxhumana nomphakathi izilinganiso nokubuyekezwa, amathuba akho okuthola izibuyekezo ezingezinhle eziku-inthanethi cishe aseduze.
Njengoba kusesidlangalaleni njengoba isilinganiso esingesihle noma ukubuyekeza okungekuhle kungaba, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi impendulo yakho kuleso silinganiso esingesihle noma isibuyekezo ibaluleke kakhulu - uma ingabalulekanga kangako. Impendulo enhle ekubuyekezweni okungalungile ingaqhuba inhlonipho ethembeke kakhulu nethemba lebhizinisi lakho. Amabhizinisi nabathengi banamuhla bayabona ukuthi konke ukuxhumana kwebhizinisi ngeke kuphelele… kepha ukuthi ibhizinisi liphendula kanjani uma lisebenza kabi kubaluleke kakhulu.
Ngibhala le ndatshana ngokususelwa ekuhlangenwe nakho kwami ​​kwe-anecdotal ukuthi ngibone kanjani ukuthi amabhizinisi anqoba isibuyekezo esingesihle - angizukuchaza izifundo noma idatha ngoba ngicabanga ukuthi ibhizinisi ngalinye linamasiko nenqubo engeke ihlale ikhona kufakwe kwinqwaba yezibalo. Nalu uhlu lwami lwamathiphu kanye nenqubo yokuphendula ekubuyekezweni okungalungile.
Kumele Uphendule… Ngokushesha - Impendulo esheshayo iyadingeka ukuhlinzeka abanye abathengi namabhizinisi ngombono wokuthi ulalele nokuthi uyakhathala. Lokho akusho ukuthi kufanele weqele eziphethweni, noma kunjalo. Kwesinye isikhathi ukuphendula kumane kusho ukuthi uzwile isikhalazo futhi uphenya isimo nokuthi usixazulula kanjani.
Yiba Nozwela - Qaphela ukuthi angishongo kanjani ukuthi "khombisa" uzwela? Lesi akusona isikhathi sokwenza sengathi uyakhathala, yisikhathi sokucabanga ngempela ngombono wekhasimende noma weklayenti elizizwa sengathi lithole insizakalo engalungile. Uma uphendula kulo muntu, zenze sengathi usanda kuba nosuku olubi kakhulu empilweni yakhe. Ngake ngaba nomholi ongitshela ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho eba nengxoxo ethintekayo nesisebenzi enza sengathi lowo msebenzi usanda kulahlekelwa yilungu lomndeni. Ngicabanga ukuthi leso yiseluleko esihle naku-inthanethi.
Yiba Nokubonga - Ngenkathi kunamaphesenti amancane kakhulu abantu laphaya okungama-troll angeneme, iningi labantu likhononda esidlangalaleni ngoba linendaba nokuthi ubaphathe kanjani futhi lithemba ukuthi awuzenzi kwamanye amakhasimende ngokuzayo. Ukuthi othile uthathe isikhathi ukubhala ngodaba oluthinta ibhizinisi lakho olungaba nomthelela kubantu abaningi kakhulu kuyimpendulo engenakulinganiswa ongayithuthukisa ibhizinisi lakho.
Lalela - Uma okulindelwe kungafinyelelwanga, lalelisisa ikhasimende lakho ukuthi ungazithuthukisa kanjani izinqubo zakho zangaphakathi. Uzomangala ukuthi mangaki amakhasimende afuna nje ukuba khona walalela njengoba ziveza. Kwesinye isikhathi ubuza nje ukuthi, "besingakwenza kanjani kangcono?" kungaholela empendulweni ethile emangalisayo yebhizinisi lakho ezothuthukisa ukwaneliseka kwamakhasimende jikelele.
Yiba Neqiniso - Akuvamile ukuthi abantu benze ihaba lapho beshiya isibuyekezo esingesihle. Kwesinye isikhathi, ababuyekezi be-inthanethi baqamba amanga ngokuphelele. Kulungile ukunikeza impendulo eyiqiniso kusibuyekezo esingalungile inqobo nje uma ugwema ukuhlasela umbuyekezi ngazo zonke izindlela. Isimo esibucayi, kepha akufanele neze uvumele amanga ngebhizinisi lakho.
Thola Isixazululo - Ukufuna isisombululo kubalulekile. Ngenze utshalomali olukhulu kumhlinzeki wosizo lwasekhaya eminyakeni embalwa edlule futhi sonke isimo saba yinhlekelele. Ngemuva kokuthi ngishiye ukubuyekeza okude ku-inthanethi nayo yonke imininingwane, umnikazi wenkampani (owayengazi ngalesi simo) wangithinta mathupha wangibuza, “Singakulungisa kanjani lokhu?”. Isixazululo besingaphelele, kepha ngisuse isibuyekezo esingesihle ngemuva kokuthi inkampani itshale isikhathi namandla ukuzama ukuxazulula lesi simo.
Yithathe ungaxhunyiwe ku-inthanethi - Ukuba nempikiswano emuva naphambili ku-inthanethi noma nge-imeyili ngeke kusize idumela lebhizinisi lakho. Isisho sakudala esithi "sidumisa esidlangalaleni, silungise ngasese" sisebenza esimweni sokubuyekeza esingesihle. Ngaso sonke isikhathi cindezela ithuba lokukhuluma nomuntu mathupha ukuze bezwe ukukhathazeka kwakho futhi ubavumele bakhiphe ukukhungatheka kwabo. Umbhalo wokufunda awunikezi zinga lozwelo empendulweni. Uma umbuyekezi efisa ukuqhubeka ekushaya ku-inthanethi, kulungile ukuphendula ngokuthi umnyango wakho uhlala uvulekile kepha udinga ukuwuthumela ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Beka ubuso empendulweni yakho - Akekho othanda ukukopisha / ukunamathisela ukuphendula okuzenzakalelayo okuvela kunhlangano enkulu. Uma ubhala impendulo yakho, bhala igama lakho nemininingwane yokuxhumana ukuze umuntu abone ukuthi kukhona umuntu wangempela othathwe umthwalo wokuxazulula lesi simo.
Fingqa kafushane - Impendulo emfushane kunazo zonke impendulo engcono kakhulu ekubuyekezweni okungalungile online. Bonga lowo muntu, yamukele inkinga, sebenzela esinqumweni, bese unikeza imininingwane yokuxhumana ukuze ulandele isixazululo ungaxhunyiwe ku-inthanethi. Akunasidingo sokubhala izigaba nezigaba okungekho noyedwa ozofunda noma azazise.
Landela Up Online Lapho Kudingekile - Ngivame ukubona izibuyekezo ezingezinhle online mayelana nezinhlelo zokusebenza zeselula ezibhekisa kuziphazamisi ezilungisiwe kuzinguqulo ezizayo. Kubucayi impela ukumemezela esidlangalaleni ukuthi inkinga ixazululiwe futhi ubonge umuntu oyibikile. Lokhu akulona icala lezinqumo zomuntu siqu… izinqubo zomphakathi noma ushintsho lomkhiqizo kuphela oluxazulule le nkinga kumakhasimende amaningi. Umbuyekezi akafuni ukukubona ukhombisa ukuxazululwa kwesimo sabo ku-inthanethi njengendlela yokuqhakambisa ibhizinisi lakho.
Ikhasimende ALIHLALE LIQINILE
Ikhasimende alikho njalo kwesokudla. Ngicabanga ukuthi esinye sezisho ezimbi kunazo zonke ezake zenzeka. Ngihlangane namakhasimende ambalwa adelelayo empilweni yebhizinisi lami. Ngangihlala ngincike emaqinisweni uma kukhulunywa ngalezo zimo futhi ngigweme izimpendulo ezingokomzwelo noma izinsolo. Ikakhulu uma kukhulunywa ngabasebenzi bami abenze okungaphezulu kokuzama ukuxazulula lesi simo.
Ngincamela ukugcina nokuvikela isisebenzi esihle kunokulahlekelwa yikhasimende elibi eliqambe amanga ngesimo esithile.
Enye indawo yokudlela engangisebenza nayo yayinezibuyekezo ezisolisayo, ezingaziwa, nezimbi ezaziphawula ngezitsha ezazinganikeli ngazo. Baphendule empeleni ekubuyekezweni ngenkathi begwema noma yikuphi ukungqubuzana nombuyekezi online.
UNGALOKOTHI Uhlasele Umbuyekezi
Ungalokothi uhlasele noma ugcizelele ukuthi umbuyekezi wakho uqamba amanga noma ungene engxabanweni nombuyekezi online. Ukuphendula ekubuyekezweni okungekuhle ngokunganaki okuningi kuyindlela eqinisekile yokungcwaba idumela lebhizinisi lakho njengebhizinisi elinakekelayo, elinobubele nelinengqondo. Kulungile ukuvikela amanga aluhlaza mayelana nebhizinisi lakho ngokusebenzisa amaqiniso… kepha ungalokothi, uhlasele umbuyekezi noma ugcizelele ukuthi banephutha. Ukubiza ikhasimende elikukhokhele umqambimanga ku-inthanethi ngeke kuqhubekele phambili ibhizinisi ngendlela yakho.
Izibonelo Zezimpendulo Zokubuyekeza Ezimbi
Bengifuna ukunikela ngezibonelo ezithile zezimpendulo zokubuyekezwa ezingezinhle ezingakusiza ekwakheni impendulo efanele ekusiza ukuthi uthuthukise idumela lakho jikelele ku-inthanethi. Nazi ezinye izimo:
Ukubuyekezwa Okungafanele Udinga Ukucwaninga Kabanzi
[Igama], ngiyabonga ngokusazisa lokhu. Sithatha impendulo yamakhasimende ethu ngokungathi sína kakhulu futhi njalo sifuna ukweqa okulindelwe. Siphenya lolu daba futhi abasebenzi bethu bazoxhumana ezinsukwini ezi-2 ezizayo zokusebenza. Singakuthokozela ukuzwa okuningi ngalesi simo futhi sizoyazisa impendulo yakho. Ngabe kuzolunga uma sithinte wena ngocingo? Zizwe ukhululekile ukungithumelela umyalezo [Igama Lami] noma ushayele isandiso sami [X] ku- [Inombolo Yocingo].
Ukubuyekezwa Okungaziwa Okungaziwa
Siyabonga ngokusazisa lokhu. Sithatha impendulo yamakhasimende ethu ngokungathi sína kakhulu futhi njalo sifuna ukweqa okulindelwe. Singakujabulela ukuzwa kuwe ukuze ufunde kabanzi ngalesi simo. Ngabe kuzolunga uma sithinte wena ngocingo? Zizwe ukhululekile ukungithumelela umyalezo [Igama Lami] noma ushayele isandiso sami [X] ku- [Inombolo Yocingo].
Ukubuyekezwa Okungamanga Okungelona iqiniso
[Igama], asiwunikeli lowo mkhiqizo. Ngicela ungithinte [Igama Lami] noma ushayele isandiso sami [X] ku- [Inombolo Yocingo] ukuze sikwazi ukuthola eminye imininingwane ngalesi simo?
Ukubuyekezwa Kweqiniso Okubi
[Igama], ngiyabonga ngokusazisa lokhu. Sihlala sifuna ukweqa okulindelwe ngamakhasimende futhi lokhu kubukeka njengethuba elihle lokuthi senze njalo. Sithanda ukukhuluma nawe uqobo ukwenza lokhu kuwe ngoba ibhizinisi lakho libalulekile kithi. Ngabe kuzolunga uma sithinte wena ngocingo? Zizwe ukhululekile ukungithumelela umyalezo [Igama Lami] noma ushayele isandiso sami [X] ku- [Inombolo Yocingo].
Umbuyekezi Omubi Oqhubeka Nokuqhubeka
[Igama], ngeshwa, kuze kube yilapho sikhuluma nawe uqobo ukuphenya ngalesi simo, ngeke sikwazi ukuxazulula isimo lapha. Ngicela ungithumelele umlayezo [Igama Lami] noma ushayele isandiso sami [X] ku- [Inombolo Yocingo].
Inqubo Exazululiwe Kusuka Ekubuyekezweni Okungalungile
[Igama], ngiyabonga kakhulu ngokusazisa lolu daba nokuchitha isikhathi nathi ukuxazulula inkinga. Njenge-FYI kunoma ngubani olandela le nkinga ku-intanethi, siguqule umkhiqizo / inqubo yethu futhi sayisusa le nkinga kusukela [ngosuku].
Kulungile Ukunikela Ekubuyekezweni Okungalungile
Kwesinye isikhathi ukuzibandakanya kwebhizinisi kumane kungasebenzi. Ungazama konke ukuxazulula isibuyekezo esingesihle futhi kungahle kungaholeli kunoma yiluphi uhlobo lwesinqumo elenza ikhasimende lihlehlise inkambo noma lisuse isibuyekezo. Kuzokwenzeka.
Uma nje abathengi namabhizinisi bebona ukuthi wenze konke okusemandleni akho ukuzama ukuxazulula isimo esiholele ekubuyekezweni okungekuhle, bazokunika inzuzo yokungabaza.
Impendulo enhle kakhulu ekubuyekezweni okungekuhle ukubuyekeza OKWENGEZIWE
Uma ibhizinisi lakho lilwa nokubuyekezwa okumbalwa okungekuhle okungeke kwaphela, ikhambi elingcono kakhulu ukucela amakhasimende ajabule nokubaphusha ukuthi banikeze izibuyekezo ezikhazimulayo zenkampani yakho. Ngenkathi abathengi abaningi begxumela ekufundeni izibuyekezo ezingezinhle (ngiyakwenza), akungabazeki ukuthi iphesenti eliqine kakhulu lezibuyekezo ezinhle lizoba nomthelela ekubukeni kwabo kwedumela lakho.
Futhi-ke, ukubona impendulo ecatshangelwe kukho konke ukubuyekezwa okungalungile lapho uzame khona ukuthola isinqumo kuzosiza kakhulu!
Tags: indlelaukubuyekeza okungekuhle onlineimpendulo yokubuyekeza engemihleukubuyekezwa okungalungileUkubuyekezwa okuku-inthanethiIzibuyekezo